It's my संसार: 2011
Barry aka Bir Bahadur,
The 61-year-old surgeon from Colorado, has visited Nepal more than 30 times. He is fluent in Nepali, familiar with Nepal's social, cultural and political affairs, wears the traditional Nepali 'dhaka topi' regularly and prefers to be called Bir Bahadur Subba.
After completing his BA 40 years ago, he had two alternatives: work in the mountain states of the US or volunteer inadeveloping country half way across the world. After serious deliberation he chose the latter, joining the Peace Corps where he was assigned to teach science ataschool here in Namsaling of Ilam district.
Bialek recalls the initial difficulties he had while learning Nepali, his frustration at not being able to speak the language for the first six months and the inaccuracies he found in translated texts used in science modules such as: the 'Sun revolves around the Earth'.
When Bialek realised his students had no textbooks, he taught science classes using examples from daily life and put togetherascience laboratory in the school.
Fellow teacher Homnath Adhikari recalls Bialek was well-liked by Namsaling residents. Adhikari himself was inspired when Bialek once asked his class to write an essay on where they wanted Ilam and Nepal to be in 100 years.
"That essay completely opened my mind," says Adhikari, who went to set up the Namsaling Comminuty Development Center (NCDC).
Bialek went home after two years to becomeateacher in America. He frequently met classmates from George Washington University to discuss ways to implement long-term development projects. Eventually, Bialek decided to dedicate his life to sustainable development in Nepal and returned in 1983 to help launch NCDC with Adhikari. Bialek is now involved with the organisation, Engineers Without Borders which helps projects in developing countries.
NCDC works with VDCs throughout Ilam and across Nepal in environment, agriculture, hydroelectricity, and biodiversity projects. Bialek has set up the Nepal Community Development Foundation in North America to raise money for his work in Nepal. During this recent visit to Nepal Bialek was advising Ilam Municipality on how to turn itself intoa'green town'.
In September 1962, Nepal welcomed the inaugral batch 68 Peace Corps volunteers, becoming one of the first countries in the world to hostaprogram pioneered by president John F Kennedy.
The next 40 years saw at least 4,000 American graduates and professionals serve in Nepal. It wasadifferent, roadless, tvless, phoneless and internetless Nepal in those days, yet the volunteers taught in schools and colleges, trained teachers, assisted at health posts and helped out with agricultural programs. In return they gained valuable experiences living and working inadeveloping county and forged lifelong friendships. Many volunteers continued working in Nepal as diplomats or in the development and education sector.
The Peace Corps was closed down in September 2004 after the Maoists set offaminor explosion at the American Information Centre in Gyaneswor. Initially the withdrawal was meant to last six months, but as the security condition worsened, the Peace Corps suspended its Nepal program indefinitely.
The move to return the Peace Corps was initiated by Finance Minister Bharat Mohan Adhikari during his visit to Washington last year. He madeawritten request to the US government, and an exploratory American mission visited Kathmandu earlier this year. Sandra Wagner, who once headed the Peace Corps Asian department, has been appointed director of Peace Corps Nepal. the budget for the revived Peace Corps comes from the USAID's health outlay, sources say. Wagner is expected in Kathmandu in January to prepare the logistics for opening the new office.
The news of resumption of the Peace Corps program has delighted alumnae and friends of Nepal around the world.
Barry Bialek,avolunteer stationed in Ilam in the early 1970s says: "My Peace Corps experience in Nepal opened my heart and mind in ways I had never imagined. I'm very glad the Peace Corps are coming back to Nepal, both for the new volunteers and for Nepal." (See profile, above.)
(Published in Nepali Times 23 Dec. 2011)
Posted by रोशन साँवा at 9:48 PM No comments:
रहस्यमयी उत्तर कोरिया र किम जङ इलको मृत्यु
उत्तर कोरिया कतिसम्म रहस्यमयी छ भन्ने कुराको पछिल्लो पुष्टि हो शासक किम जङ इलको मृत्युको खवर । शनिवार विहान नै रेलमा हृदयाघात भई किमको मृत्यु भइसकेको रहेछ । तर उत्तर कोरियाका धेरै नागरिक र मुलुकबाहिरका सारा विश्वले दुइ दिनपछि सोमबार विहानमात्र मृत्युको खवर पाए ।
सूचना प्रविधिको तीब्रतर विकासले गर्दा कुनै सूचना तत्काल विश्वभर फैलने अहिलेको जमाना छ । समाचार प्रसारण गर्ने रेडियो र टेलिभिजनलाई समेत उछिन्दै सामाजिक सञ्जालहरु -फेसबुक, ट्वीटरलगायत) मार्फ सूचना, जानकारीहरु संसारभर फैलिइरहेका हुन्छन् । तर अमेरिका र दक्षिण कोरियासँगको तीतो सम्वन्ध र उत्तर कोरियामा १५ वर्षशासन गरेका तथा मुलुकभित्र 'लोकप्रिय नेता' भनेर चिनिने किमको मृत्युको खवर दर्ुइ दिनपछि वाहृय संसारले थाहा पायो ।
उत्तर कोरियाको सरकारी टेलिभिजनकी प्रस्तोताले आँशु झार्दै किमको मृत्युको खवर प्रसारण गरेपछि अरु समाचार च्यानल, एजेन्सीले प्रसार गर्न थालेका थिए । कोरियन सरकारी टिभिको समाचारमा मृत्युको कारण र मितिबारे प्रष्ट जानकारी उल्लेख नभएकाले अन्य सञ्चारमाध्यमलाई विस्तृत विवरण र्सार्वजनिक गर्न निकै समय लाग्यो । विविसी, अलजजिराजस्ता समाचार च्यानलले उत्तर कोरियाको सरकारी टिभिलाई उधृत गर्दै अपुरो खवर प्रसारण गरे । टेलिभिजन च्यानलहरुले किमको मृत्युले पार्नसक्ने प्रभावलगायतका विषयमा मात्र रिपोटिङ गरे । मृत्युको खवर र्सार्वजनिक हुनासाथ एसियाली शेयर कारोबार ओरालो लागेको, दक्षिण कोरिया, जापानले सुरक्षा र्सतर्कताको प्रवन्ध मिलाएकोजस्ता खवरहरु पनि प्रसारण भए । धेरै बेरपछिमात्र अलजजिरामा क्वालालम्पुरका रिपोर्टरले किमको मृत्युको कारण र मिति जानकारी गराएका थिए ।
कम्युनिष्ट मुलुक उत्तर कोरियाका प्रायः सबै कुरा बाहिरी संसारका लागि रहस्यमयी लाग्छन् । गतवर्षविश्वकप खेल्न दक्षिण अप्रिmका जाँदा उत्तर कोरियाली टिमलाई रहस्यमयी टिम भनेर पुकारिन्थ्यो । उत्तर कोरियामा इमेल, इन्टरनेट भित्रिसकेपनि सबैको पहुँचमा छैन र सहज पनि छैन ।
उत्तर कोरियामा महान नेता भनेर पुकारिने किम जङ इलको कार्यालय कहाँनिर छ भन्ने कुरा मुलुकभित्रकै धेरै नागरिक -नेताहरुसमेत) जानकार छैनन् । राजधानीबाहिर नजिकैकको गाउँमा बसोबास गर्ने सयौं नागरिकहरु पनि राजधानी प्योङयाङ पुगेका हुँदैनन् । किनभने त्यहाँ मानिसहरु आफुखुशी हिंड्न पाउँदैनन् । यसका लागि विशेष काम चाहिन्छ र पार्टर्ीी अनुमति दिनर्ुपर्छ । सामान्यता किमको भ्रमणसम्वन्धी समाचारहरु सरकारी टिभीले फर्केपछिमात्र प्रसारण गर्छ । उत्तराधिकारी भनिएका किमका छोरा किम जङ उनको उमेर, अध्ययनका बारेमा अहिलेसम्म बाहिर र्सार्वजनिक भएको छैन । स्वीट्जरल्याण्डमा पढेको भनिएका युनको उमेरलाई २० देखि ३० वर्षम्म अनुमान गरिन्छ ।
उत्तर कोरियाभरि करि साढे चार सय विदेशीको उपस्थिति छ । चीन र रुसबाहेक अरु सबैको दुतावास एउटै कम्पाउण्डभित्र अटाएको छ । राष्ट्र संघ, युरोपेली संघ र केही युरोपेली विकास संस्थाका अधिकारीलाई महिनामा दर्ुइपल्ट कोरियाली दोभाषे लिएर अंग्रेजीमा मात्र बोल्न पाउनेगरी राजधानीबाहिर जान दिइन्छ र अरु कुराकानी गर्न बन्देज लगाइन्छ ।
किम जङ इलको बारेमा अन्तर्रर्ााट्रय सञ्चारमाध्यममा तीन वर्षयता मृत्यु भएको, विरामी भएको, अस्पताल लगिएको लगायतका विवादास्पद समाचारहरु आइरहन्थे । यसबारेमा उत्तर कोरिया आफैले पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैनथ्यो । अहिले भने ६९ वषर्ीय किमको मृत्युको खवर अनपेक्षित रुपमा आएको धेरैले बताएका छन् ।
उत्तर कोरियामा प्रत्येक नागरिकले किम इल सुङ -किम जङ इलका पिता एवं पर्ूव शासक) को लकेट झुण्ड्याएका हुन्छन् । उनीहरुलाई हरेक आइतबार किम इल सुङको बारेमा अध्ययन गर्न र्सार्वजनिक विदा दिइन्छ । किम इल सुङको नामबाट ठूला विश्वविद्यालय, सडक, विद्युत गृह, सभागृह, प्रतिष्ठानको नामकरण गरिएको छ । किम इल सुङ र किम जङ इलको रंगीन तस्वीरहरु नभएको कुनै चोक भेटिन्न । धेरै नागरिक किम जङ इलसँग मुडअनुसार मौसम परिवर्तन गरिदिनसक्ने जादुमयी शक्ति भएको विश्वास गर्छन् ।
अचेल उत्तर कोरियालाई अमेरिका र दक्षिण कोरियाले नाकावन्दी लगाएको छ । उत्तर र दक्षिण कोरियाबीचको तीन वर्षो युद्ध १९५३ मा सिद्धिएपनि आणविक हतियार उत्पादन तथा परीक्षणको अभियोगमा उसमाथि नाकावन्दी छ । उत्तर कोरियाले किम जङ इलले सैनिक पहिला भन्ने सिद्धान्तमा आधारित संगुन नीति अघि सारेको छ । आणविक हतियार उत्पादन तथा परीक्षण र सेनामा केन्द्रित हुँदा उत्तर कोरियाको आर्थिक अवस्था जर्जर बनेको छ । उत्तर कोरियाले २००६ मा पहिलोपटक आणविक परीक्षण गरेको थियो । उसको सैनिक फौजलाई विश्वकै चौथो ठूलो मानिन्छ । कम्युनिष्ट मुलुक भएकाले उत्तर कोरियाको अर्थतन्त्र राज्य नियन्त्रित छ ।
कम्युनिष्ट पार्टर्ीी संस्थापक नेता किम इल सुङले सन् १९४५ मा उत्तर कोरियालाई स्थापित गरेका हुन् । पार्टर्ीीथापना, सेना गठन गरेर जापानी साम्राज्यलाई युद्धमार्फ पराजित गरेर मुलुक स्थापित गरेका कारण उत्तर कोरियाली नागरिकले किम इल सुङलाई सम्मान गर्छन् तर उनले बाँचुञ्जेल अर्थात १९९४ सम्म सत्ताको बागडोर सम्हाले । त्यसपछि छोरा किम जङ इलले शासन गरिरहेका थिए । गत सेप्टेम्वरमा किम जङ इलका छोरा किम जङ उन उत्तराधिकारी घोषित भएका हुन् । उत्तर कोरिया अहिले एउटा परिवारको अधिनायकत्वमा चलिरहेको छ ।
किम जङ इलको चिनारी
किम जङ इल १६ फेब्रुअरी १९४२ -तर सोभियतको अभिलेखमा १९४१) मा जन्मिएका हुन् । सोभियतको अभिलेखअनुसार किम जङ इलले सोभियतको ८८औं ब्रिगेडको पहिलो बटालियन सम्हालिरहेका बेला किम जङ इलको भ्यात्स्कोभ भन्ने ठाउँमा जन्म भएको हो । तर उनको आधिकारिक जीवनीमा बएक्दु भन्ने हिमालनेरको सैनिक क्याम्पमा जन्म भएको र जन्मेको बेला हिमालमा दर्ुइ वटा इन्द्रेणी देखिएको उल्लेख छ । उनको आमको मृत्यु १९४९ मा भयो । कारण वच्चा जन्माउने क्रममा मृत्यु उल्लेख भएपनि गोली लागेर मृत्यु भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । किम जङ इलको बाल्यकालमा बोलाउने नाम युरी र्इर्सर्ेेेभिक किम थियो ।
उनी पढ्दादेखि नै बालबालिकाको संगठन, डेमोक्रेटिक युथ लिगलगायतमा क्रियाशील थिए । उनको सौतेलो भाइ किम प्योङ इललाई पोल्याण्डको राजदुत बनाएर पठाइएको छ । दाजुभाइको मनमुटावलाई अन्त्य गर्न बुबाले नै प्योङ इललाई मुलुकबाहिर पठाएको बताइन्छ ।
किम जङ इल अक्टोबर १९८० को छैटौं अधिवेशनबाट पोलिटव्युरो, पार्टर्ीीचिवालय, मिलिटरी कमिसनमा जिम्मेवारी पाए । फेब्रुअरी १९८२ को सातौं अधिवेशनबाट उनलाई उत्तराधिकारीको रुपमा हेरिन थालियो । किम २४ डिसेम्बर १९९१ मा उत्तर कोरियाको सुप्रिम कमाण्डर भए । १९९२ देखि रेडियोले 'प्यारो बुवा' -डियर फादर) भनेर पुकार्न थालेको हो ।
बाबुको अन्तिम र छोराको सुरुवाती शासनमै अर्थात १९८० र १९९० को दशकमा उत्तर कोरिया बढि केन्द्रिकृत र अधिनायकवादी भएको बताइन्छ । १९८० कै दशकमा किम इल सङले 'जुछे' -आत्मनिर्भर)को नीति लागू गरेर बाहृय व्यापार बन्द गर्न थालेपछि उत्तर कोरियाले आर्थिक संकट व्यहोर्न थालेको हो ।
अप्रिल २००९ मा संशोधन भएको संविधानले उनलाई सर्वोच्च नेताको हैसियत दिएको थियो । उनलाई 'प्यारो नेता', 'हाम्रो बुबा' भनेरसमेत पुकारिन्थ्यो । फोर्ब्स पत्रिकाले उनलाई २०१० मा विश्वका शक्तिशाली मानिसहरुको सूचीमा ३१ औं नम्बरमा राखेको थियो ।
उनको बुबा किम इल सङको पनि ८२ वर्षो उमेरमा ८ जुलाई १९९४ मा हृदयाघातबाटै मृत्यु भएको थियो । बुबाको मृत्यु भइसकेपछि पनि उनलाई शासकको हैसियत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न तीन वर्षलागेको थियो ।
सम्भावित उत्तराधिकारीको रुपमा हेरिएका किम जङ इलका जेठा छोरा किम जङ नाम २००१ मा नक्कली राहदानी बोकेको आरोपमा टोकियोनजिकै नारिता विमानस्थलमा पक्राउ परेपछि उत्तराधिकारीको सम्भावना टरेको थियो । २ जुन २००९ मा कान्छा छोरा किम जङ युनलाई उत्तर कोरियाको आगामी नेताको रुपमा चर्चा गर्न थालिएको थियो ।
किम जङ इल बुबाजस्तै हवाई यात्रा गर्न डराउँथे । त्यसैले उनी रेल चढेर चीन र रुसको यात्रा गर्थे । उनी फिल्म पारखी थिए । किमसँग २० हजारभन्दा बढी भिडियो टेप र डिभिडीको संकलन रहेको बताइन्छ । उनको चारमध्ये एक श्रीमती कोरियन फिल्मकी नायिका किम हेइ रिम थिइन् । किमले 'अन द आर्ट अफ सिनेमा' भन्ने पुस्तक पनि लेखेका थिए । किमकै आदेशमा १९७८ मा कोरियन फिल्म निर्देशक सिन साङ ओक र उनकी नायिका श्रीमती चोई इयुन हिलाई नियन्त्रण गरेर जुछे -आत्मनिर्भर) नीतिमा आधारित फिल्म 'डायरी अफ अ गर्ल स्टुडेण्ट' निर्माण गर्न लगाएका थिए ।
रहस्यमयी किम प|mान्समा बनेको वाइनबाहेक विदेशी उत्पादन खाँदैनथे भन्ने गरिन्छ । उनका रुचि, सम्पत्तिका बारेमा विभिन्न खालका अडकलबाजी लगाउने गरिन्छ ।
Posted by रोशन साँवा at 10:16 PM No comments:
Posted by रोशन साँवा at 12:42 AM No comments:
Posted by रोशन साँवा at 1:11 AM No comments:
धेरै पुस्तक पढ्नेमध्ये राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले मलाई सबभन्दा बढी प्रभाव पारे । खोजपत्रकारिता केन्द्रको पाठशालामा शर्माले हामीलाई समाज, राजनीति र इतिहासका बारेमा सिकाउँथे । यो झण्डै सात वर्षघिको प्रसङ्ग हो । तीन महिने कक्षामा छलफल हुँदा उनी कुन विषयमा कुन लेखकले (नेपाली/विदेशी) कुन पुस्तकमा के लेखेका छन्, फटाफट भन्थे । यतिधेरै पुस्तक र लेखकका प्रसङ्ग ल्याउँथे कि हामी तीनछक्क पथ्र्यौं ।
उनी साह्रै धेरै पुस्तक पढ्ने व्यक्ति रहेछन् । उनले जति पुस्तक पढ्ने मैले अरु भेटेको पनि छैन । ज्ञानगुन लिने, फुसदमा समय कटाउने त छँदैछ, उनका लागि मनोरञ्जन लिने साधन पनि पुस्तक नै रहेछ । अमेरिकामा उच्च शिक्षा लिएका शर्माले हामीलाई पनि पुस्तक पढ्ने तरिका पनि सिकाउँथे । त्यतिबेला हरेकले पुस्तक पढेर कक्षामा जानुपथ्र्यो र विभिन्न कोणबाट छलफल गर्नुपथ्र्यो । पढ्दै आएका इतिहास शतप्रतिशत सत्य छैनन्, राणाहरु खरावमात्र थिएनन्, इतिहास कसरी लेखिन्थेलगायतका थुपै्र कुराको चेत पाठशालामा खुलेको थियो । शर्मा अहिले राष्ट्रपतिका सल्लाहकार छन् क्यारे । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सल्लाहकारमा उनी प्रायः छुट्दैनथिए ।
त्यो पाठशालाले हामीलाई पढ्न उत्प्रेरित गथ्र्यो । सहभागीले पाउने एकमुष्ठ भत्तामध्ये एक हजार रुपैयाँले अनिवार्य पुस्तक किन्नुपथ्र्यो । त्यसबाहेक आयोजकले पुस्तक प्दर्शनीमा पनि पठाउँथे । पाठशाला सकिएपछि पढ्ने बानीले निरन्तरता पाएन । तरपनि नाम चलेका पुस्तकहरु भेटेसम्म पढ्न छुटाउनुहुन्न जस्तो लाग्छ ।
रुचि जगाउने विषयवस्तु र पढ्दा पुस्तकबाट ग्रहण गर्ने कुरा व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ होला । व्यक्तिगत रुचि, आफ्नो पेशा, व्यवसायले पनि यसमा प्रभाव पार्दो हो । पढ्दा कसैलाई एउटै कुराले बढी प्रभाव पार्छ होला भने अर्कोलाई अर्को कुराले । त्यसैले एउटै पुस्तकको बारेमा पनि कसले कसरी लेखेको लेखेको छ भनेर हर्ेन पनि मलाई मन लाग्छ । पछिल्लो प्रसङ्ग, आनी छोइङ डोल्माको 'फूलको आँखामा' पुस्तक बजारमा आएको छ । यसका बारेमा समीक्षात्मक लेखहरु पनि पत्रिकाहरुमा आएका छन् । मलाई ती लेखहरुमा आनी छोइङ डोल्मा अर्को एउटा पाटोलाई पनि समेटिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो । डोल्मा छेक्विद आनी छोइङ डोल्मा भएकैले वा 'फूलको आँखामा फूलै संसार' गीत गाएकैले मात्र चर्चित होइनन् भन्ने कुरालाई पुस्तकमा र्छलङ्ग हुन्छ जुन कुरा पुस्तक नपढ्ने धेरैलाई थाहा हुदैन ।
उनी अरु आनीभन्दा फरक थिइन् । उनी पूजापाठमा मात्र सिमित भइनन् । गुम्बाभित्र अंग्रेजी गीत सुन्थिन्, उपन्यासहरु पढि्थन्, फिल्म हेर्थिन्, नाच्थिन्, गाउँथिन् । वाद्यवादन सिकिन्, मन्त्रपाठ गर्न थालिन् । २०५२ सालमा गाडी हाँक्न थालेकी उनी पहिलो आनी ड्राइभर हुन् । आनीहरुले पढ्नुपर्छ भनेर आर्यतारा स्कुल खोलिन् । विनामिहिनेत पाएको आर्थिक सहयोगमा मात्र भर नपरेर अर्थ संकलन गर्नका लागि विभिन्न मुलुक चाहार्दै सांगीतिक कार्यक्रम गरिन् ।
आनी छोइङ डोल्मा अहिले मिर्गौला रोगीहरुलाई सस्तोमा उपचार गराउने अस्पताल खोल्ने अभियानमा छिन् । 'फूलको आँखामा' पुस्तक किन्नु भनेको अस्पतालको लागि सहयोग गर्नु पनि हो । पुस्तकले अरु थुप्रै सकारात्मक सन्देश पनि दिन्छ ।
पुस्तकबाट धेरै कुरा सिकिन्छ । राम्रा पुस्तकहरुले सन्देशमुलक र प्रेरक विचारहरु समेटेका हुन्छन् । विभिन्न खालका तरिकाहरु सिकाएका हुन्छन् । पाठकलाई तानिरहने शैलीमा लेखिएका हुन्छन् । शीर्षक सुन्नासाथ त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूण् जिज्ञासालाई मेट्न सक्नु राम्रो पुस्तकको विशेषता हो । आनीको पुस्तक भन्नासाथ पाठकहरुलाई उनीहरुको प्रेम र यौनका बारेमा पाठकमा जिज्ञासा उत्पन्न हुन सक्छ, 'फूलको आँखामा' पुस्तकले त्यसलाई मेट्ने कोशिस गरेको छ ।
जिज्ञासा नमेटिँदा, एउटै कुरा दोहोरिहँदा र सतही रुपमा प्रस्तुति हुँदा पाठकले खल्लो महशुस गर्छन् । झमक घिमिरेको बहुचर्चित 'जीवन काँडा कि फूल' पुस्तकमा कतिपय कुराहरु दोहोरिन्छन्, बहकिएजस्तो पनि लाग्छ, कुनै ठाउँमा थप विवरणको खाँचो देखिन्छ । तर झमकको साहस र संर्घष्ालाई भने सलाम गर्नुपर्छ ।
पत्रकारले समाचार लेख्दा एउटै एङ्गल -कोण) मा रहेर विस्तृत विवरण दिएजस्तै राम्रा पुस्तक वा लेख एउटै विषयमा केन्द्रित हुन्छन् । विवरणहरु विस्तृतरुपमा पस्किएको हुन्छ । जस्तो वहुचर्चित पुस्तक- अल्केमिष्ट । पाउलो कोएल्होले लेखेको यो पुस्तकमा अमूल्य धनसम्पत्ति पाउनका एउटा किशोरले मरुभूमिमा गरेको यात्राको बारेमा केन्द्रित छ । अनावश्यक लम्बेतान कुरा थोपरिएको छैन । त्यस्तै चेतन भगतको 'फाइभ पोइन्ट सोमवन' परीक्षामा पाँच अंकको हाराहारीमा नतिजा ल्याउने विद्यार्थीको कथा छ । यसमा आधारित फिल्म 'थ्री इडियट्स' पनि छ । तर पुस्तक र फिल्म उस्तै छैनन् ।
यात्राका बारेमा लेखिएका पुस्तकहरु पनि रमाइला हुन्छन् । यस्ता पुस्तक तथा लेखमा लेखकले यात्रा गर्ने क्रममा भोगेका सामान्य कुरामात्र समेटिएका हुँदैनन् । यात्रा गर्ने तरिका, भौगोलिक बनावट, खाने-बस्ने प्रवन्ध, खर्च र समयलगायतका थुप्रै विवरणहरु लेखिएका हुन्छन् । यस्ता पुस्तक र लेख पढेपछि सम्वन्धित ठाउँको यात्रा गर्न सजिलो हुन्छ । नेपालमा नियात्राका पुस्तकहरुकै कारण प्रतीक ढकालले प्रशिद्धी कमाउँदैछन् ।
कर्ण शाक्यको 'सोच' र 'खोज' ले नेपालभित्र र बाहिर कस्ता-कस्ता ठाउँहरु छन् भन्ने जानकारी दिन्छ । कृष्ण पहाडीको 'स्वतन्त्रता मन्तव्य यात्रा' पुस्तक पढ्दा पाठकले युरोप र अमेरिकाको यात्रा गर्दा भिसा, पासपोर्ट तथा जहाज र गाडीमा यात्रा गर्नेलगायतका थुप्रै तरिकाहरु पनि सिक्छन् । जोन उडको नेपाली अनुवाद 'माइक्रोसफ्टदेखि बाहुनडाँडासम्म' पुस्तकले पुस्तक संकलन गर्ने तरिका सिकाउँछ । यही पुस्तकबाट प्रभावित भएर नेपालका थुप्रै युवाले विद्यालयहरुमा पुस्तकालय खोलिदिएका छन् । इलामकै जमुना- ८ का हाम्रा साथी कुमार गुरुङ जोन उडबाटै प्रभावित भएर गाउँको विद्यालयमा पुस्तकालय खोल्ने अभियानमा छन् । चेतन भगतको 'थ्री मिस्टेक्स अफ माइ लाइफ' उपन्यासले व्यापार गर्ने तरिका सिकाउँछ । नारायण वाग्लेको 'पल्पसा क्याफे' ले चित्रहरुको बारे जानकारी दिन्छ ।
सामान्यतया सरल भाषाशैलीमा लेखिएका र एउटै विषयमा गहन प्रस्तुति भएका पुस्तकहरु चलेका छन् । मुनामदन अझै र्सवाधिक विक्रीको सूचीमा रहनु सरल भाषाशैली नै हो । सरल भाषाशैली नभए अहमदावाद, भारतका चेतन भगतको उपन्यासहरु यति धेरै बिक्ने थिएनन् । बुद्धिसागरको 'कर्नाली ब्लुज' बाबु-छोराको सम्बन्धलाई सरल तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ, यो पुस्तक पढ्दा जसलाई पनि आफ्नो बाल्यकालको झलझली याद आउँछ ।
कतिपयले प्रयोगका हिसावले नयाँ शैलीमार्फ क्लिस्ट प्रस्तुति गरेका हुन्छन् । तिनले चर्चा पाएपनि पाठकहरुका लागि सदाबहार बन्न धेरै गाह्रो हुन्छ । आख्यान विशेषगरी उपन्यास, कथामा पनि यथार्थ हो भन्नु जत्तिकै गरी प्रस्तुति गरिएको हुन्छ । लेखकले पात्रलाई साँच्चिकै भेटेको र कथा सुनेको जस्तो पार्ने गरी मुख्य कथा सुरु हुनुअघि भूमिका लेखिएको हुन्छ । नारायण वाग्लेको 'पल्पसा क्याफे', भगतको थ्री मिस्टेक्स अफ माइ लाइफ', 'वान नाइट एट कल सेन्टर' उदाहरणहरु हुन् ।
उपन्यास/कथाहरु काल्पनिक भएपनि पाठकले स्वाभाविक अर्थात पत्याउन सक्ने खालका हुनुपर्छ । कतिपय कथा र उपन्यासहरुमा अस्वाभाविक लाग्ने संवाद र प्रसंगहरु हुन्छन् । राजन मुकारुङको 'हेत्छाकुप्पा' उपन्यास पढ्दा मलाई कतिपय सर्न्दर्भ र संवाद अस्भाविक लाग्यो । पात्र छनौट र भूमिका निर्धारणमा पनि उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्ने रहेछ ।
दुइ वटा कुराले पुस्तक चर्चामा आउँदोरहेछ । एउटा, लेखक कुनै न कुनै राम्रो कामले चिनिएको हुनुपर्छ । नाम चलेको व्यक्तिको पुस्तक स्वभावैले पाठकले खरिद गर्छन् तर गुणस्तर सुध्रेन थप पुस्तक बिक्न छाड्छ । अर्को, लेखाई र विषयबस्तु अत्यन्तै राम्रो हुनुपर्छ ।
तारा र्राईको 'छापामार युवतीको डायरी' जस्ता नौलो लेखकका कृति भएर पनि विषयवस्तुको प्रस्तुति शैलीका कारण चर्चित बनेका थुप्रै उदाहरण छन् । चेतन भगतले पहिलो पुस्तक छाप्न कैयौं प्रकाशन गृहमा धाए । रुपा पव्लिकेशनले पहिलोपटक सन् २००४ मा छापिदिएको 'फाइभ पोइन्ट सोमवन' भारतमा र्सवाधिक बिक्री भयो । अहिलेसम्म आएका उनका चार वटै पुस्तक उस्तै बिके । सौखले पुस्तक लेख्न थालेका उनी अहिले जागिर छाडेर व्यावसायिक लेखक बनेका छन् ।
अहिले युवाहरुमा पुस्तक पढ्ने लहर बढेको छ । पुस्तक आफै किनेर पढेको राम्रो हो । आफूले किनेर राखेको पुस्तक चाहेको बेला फेरि हेन सकिन्छ । लेखकले मिहिनेतपूवक तयार गरेको पुस्तक सित्तैमा ज्ञान लिन प्रयोग नगर्दै वेश होला । त्यसैले म चाहिं अरुको पुस्तक मागेर पनि पढि्दनँ र आफूसँग भएको पुस्तक पनि अरु -घरबाहिर) लाई पढ्न दिन्नँ । अरुलाई दिंदा र्फकने सम्भावना पनि कम हुन्छ । आफू चाहिं, त्यसैले, सकिन्छ किनेर पढ्यो, सकिंदैन चुपचाप बस्यो ।
(इलाम पोष्ट दैनिकमा २०६८ असोज ३० गते प्रकाशित)
Posted by रोशन साँवा at 11:17 PM No comments:
Posted by रोशन साँवा at 4:48 AM No comments:
गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरी एडमिनिस्ट्रेशनमा हस्ताक्षर हुँदै
Posted by रोशन साँवा at 10:12 PM No comments:
दुइ साताअघि राँकेबाट जीप (ट्याक्सी) मा इलाम आउँदै थियौं । देउरालीनेर आइपुगेपछि एक महिलाले गाडी रोकिन् र सोधिन्, 'सिट छ ?’ चालकले पछाडिको सिटमात्र खाली रहेको जवाफ दिएपछि ती महिलाले भनिन्, 'लोकदोहोरीमा पो बस्नू ?’ झट्ट सुन्दा के भनेकी होलान् जस्तो लाग्थ्यो । तर, तिनले पछिल्लो सिटको कति रमाइलो नामकरण गरेकी रहेछिन् । मैले त त्यो सिटलाई लोकदोहोरी भनेको त्यसअघि कहिल्यै सुनेकै थिइनँ । हुन पनि जीपको पछिल्लो भाग लोकदोहोरी गाउन आमनेसामने भएर बस्ने जस्तै त हुन्छ ।
करिव दुइ वर्षघि तेह्रथुम जाने क्रममा धनकुटाको हिलेमा खाना खाँदै थियौं । एक जना अधवैंशे चिच्याए, 'जाँतो खाली भो ।’ छेवैमा ठूलो आवाज आएपछि आँखा त्यता नपर्ने कुरै भएन । ती मान्छेको थाल रित्तिएको रहेछ । त्यसैले घान लगाउन भात मागेका रहेछन् । जाँतो खाली भो भन्नासाथ होटलवालाले कुरा बुझे र थप खाना ल्याइदिए ।
सोझै अर्थ दिने शव्दभन्दा लोकदोहोरी र जाँतो भनेजस्तै लाक्षणिक शव्दहरुले बोलीचालीलाई रमाइलो बनाउँछन् । प्रायः लाक्षणिक शव्दहरुमा मिठास पनि हुन्छ । त्यसैले सर्न्दर्भअनुसार यस्ता शव्दहरु बारम्बार प्रयोग भइरहेका हुन्छन् । सोझै भन्न नमिल्ने अवस्थामा कतिपय शव्द चाहिं पर्यायवाचीजस्तै विकल्प पनि हुन् ।
हामी टेलिफोनका सर्न्दर्भमा अंग्रेजी शव्द 'होल्ड’को प्रयोग बढी गर्र्छौं । टेलिफोनमा प्रयोग गरिने 'होल्ड’को अर्थ हामी सबैलाई थाहै छ । तर यो शव्दलाई एक जना साथीले यसरी प्रयोग गरे, 'श्रीमती माइत गएर म त एक महिनादेखि होल्डमा छु यार ।’
झापाका इन्सेक प्रतिनिधि एवं मानवअधिकार सञ्जाल तथा शान्ति कार्य समूह (प्याग)का जिल्ला अध्यक्ष अर्जुन बस्नेतसँग गफ गर्दा यस्ता लाक्षणिक शव्द धेरै सुनिन्छ । करिव चार वर्षघि बाँझोका माङसेबुङ जाने क्रममा रतुवा खोलामा ढुंगैढुंगा देखेपछि उनले भने, 'ओहो, यहाँ त ढुंगाको सोरुम पो रहेछ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ इलाम शाखाका अहिलेका अध्यक्ष उमेश गुरुङ केही वर्षअघि आफूसँग जिस्कने साथीहरुलाई भन्थे, 'केटाहरुलाई खोया बाँडिदिनु पर्ला जस्तो छ ।’ यसको मतलव जिस्कनेलाई खोया खेलाउँदै बस्ने बाँदर नै त भनिएको हो । तर साथीभाइलाई सोझै बाँदर भन्न मिलेन र लाक्षणिक शव्दको सहारा लिए ।
यस्ता थुप्रै शव्दहरु छन् । जसलाई अलि यताउता पारेर अर्थ लगाउनर्ुपर्छ तर अर्थ्याउन पनि खासै गाह्रो पर्दैन । शव्दकोष पल्टाउँदा चाहिं तिनीहरुको सोझो अर्थमात्र भेटिन्छ । भाषा भनेकै सञ्चारको माध्यम न हो । शव्दहरुलाई यता उता पारेर पनि त सञ्चार गर्न सकिने रहेछ । यस्ता कतिपय लाक्षणिक शव्दहरु परिमार्जन हुँदै पनि जान्छन् । समयक्रममा नयाँ-नयाँ लाक्षणिक शव्दहरु पनि उत्पत्ति भइरहेका हुन्छन् ।
एकताका 'चमेरे सिट’ चल्तीमा थियो । बसका सबै सिट भरिएको बेला सह-चालक, कन्डक्टरले भन्थे, 'चमेरे सिटमात्र छ ।’ हामी बुझ्थ्यौं, 'जाने भए चमेराजस्तै झुण्डिएर यात्रा गर्नुपर्छ ।’ यात्राकै सर्न्दर्भमा '११ नम्बर’ बोलीचालीमा प्रयोग हुन्छ । ११ नम्बरको गाडीमा आइयो भन्ने जवाफ आयो भने ऊ हिंडेर आएछ भनेर अर्थ्याइन्छ । दुइ वटा १ ले पाइलाजस्तै संकेत गर्छ । गाडी भनेपछि नम्बर पनि हुनुपर्‍यो । त्यसैले ११ नम्बर गाडी भनिएको होला ।
तास खेल्दै भन्नुपरेन, 'ऐना हेर्दै’ भन्दा प्रायः सबैले बुझ्छन् । ऐना हेरेजस्तै एकाग्र भएर हेर्दै खेलिने तासलाई जनाउने उपयुक्त शव्द अरु कुनै छ - कसैले ढिलो काम गर्‍यो भने 'ट्युवलाइट’ भनेर जिस्क्याउँछौं । गाउँघरमा कुनै परिवार छुट्टयिो भने बाक्लो दाल खान थालिएछ नि भनेर जिस्काउने चलन छ । यसैगरी छोराछोरी जन्मिदा 'बढुवा’ भएको पनि भन्ने गर्छन् ।
'आज हात चिलाउँदैछ’ भनेपछि आज कोहीले कुर्टाई खाने सम्भावना बढ्यो भनेर र्सतर्क हुनर्ुपर्छ । कसैले नौलो र अस्वभाविक काम गर्‍यो भने 'आज पश्चिमबाट घाम झुल्कन्छ कि क्या हो’ वा 'आज किन पानी पर्‍यो भनेको त..’ भनेर व्यङ्ग्य गर्र्छौं । धुलो चाट्नु, भुइ सुँध्नु पनि त्यस्तै लाक्षणिक शव्दहरु हुन् ।
चिया बनाउने मान्छेले ढिलो गर्‍यो भने इलाममा 'चियापत्ति लिन कन्याम नै पुगेछ कि क्या हो’ भन्छौं । इलामबाहिर चाहिं 'चियापत्ति लिन इलाम नै पुगेछ कि क्या हो’ भन्छन् । खानेकुरामा चिनी, नुन, खोर्सर्ाा धेरै भयो भने 'भाउ घटेछ’ भनेर व्यङ्ग्य गर्र्छौं । फेरि थोरै भयो भने पनि 'भाउ बढेछ’ भनेर धर दिंदैनौं ।
कतिपय लाक्षणिक शव्दहरु बारम्बार प्रयोग भएपछि छोट्टदिा पनि रहेछन् । कुनै कुरालाई पक्का भन्ने अर्थ्याउन अचेल 'काँटी ठोकेजस्तै’ भनिरहनुपरेन । 'काँटी’ मात्र भन्दा बुझ्न थालिएको छ । माटोमा मिल्नु भनिरहनु परेन । माटो मात्र भने पुग्छ । दिमाग चाट्नु भन्नुपर्दैन । चाट्नुमात्र भन्दा बुझिन्छ । 'गिदी खानु’ लाई 'गिदी’ मात्र भन्दा सुन्नेले सजिलै बुझ्छन् । 'च्युरा कुर्टाई पिट्ने’ भन्नु पर्दैन, 'च्युरा’ भन्नासाथ बुझिन्छ ।
कतिपय चाहिं परिवर्तन हुँदै जाँदा बेग्लै भइसकेका हुन्छन् । पखाला लाग्दालाई 'पचहत्तर’ भनिन्थ्यो । पचहत्तरलाई समेत अंग्रेजीमा उल्था गरेर कतिपयले 'सेभेन्टी फाइभ’ भन्छन् । कसैले सेभेन्टी फाइभले सतायो भन्यो भने ऊ झाडापखालाबाट सताइएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ । बान्ता गर्नुलाई चाहिं गजल गाउनु भनिन्छ ।
आकार उस्तै हुने भएकाले शून्य अंकलाई बुझाउन आलु भनिएको हो । मान्छेलाई आलु भनियो भने खत्तम रहेछ भन्ने बुझिन्छ तर हिजोआज तरकारी पकाउँदा आलु जेमा मिसाउँदा पनि उपयुक्त हुने भनेर आलु मान्छे भन्दा कतिपयले सबैसँग मिल्ने खालको भनेर पनि अर्थ्याउन थालेका छन् ।
मात लगाउने पेय पदार्थलाई बुझाउने शव्द त अनगिन्ती छन् । साथी समूह, ठाउँअनुसार फरक-फरक हुन्छ । कुनै ठाउँमा बुझिने शव्दबाट अर्को ठाउँ वा समूहले अर्थ लगाउन नसक्ने पनि हुन्छ । नरसिंह ट्वाक, विजुली पानी, खोया, शक्ति वाटर आदि जुनले पुकारे पनि अर्थ एउटै लाग्छ । कतिपय पसलमा चिया माग्यो भने तातो कि चिसो भनेर सोध्छन् । चिसो भन्यो भने रक्सी टक्र्याइदिन्छन् ।
पेटमा मुसा कुद्यो भन्दा नबुझ्ने कम होलान् । भिजेर मुसा भइयो र मुसा भइयो भन्दा बेग्लाबेग्लै अर्थ लाग्दोरहेछ । अघिल्लोले पानीले पूरै भिजेर मुसाजस्तै चटपटाउन नसकिने भइयो भन्ने अर्थ लाग्छ भने पछिल्लोले छक्याइएको बुझाउँछ ।
शेयर कारोवारबारे जनाउने 'नेप्से’ -नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज) परिसूचकलाई कतिपयले आर्थिक अवस्था जनाउन पनि प्रयोग गर्छन् । कसैले 'नेप्से ओरालो लागेको छ’ भन्यो भने उसको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेछ भन्ने अर्थ लगाउनर्ुपर्छ । कतिपयले यसलाई 'कम्पनी टाट’ छ पनि भन्छन् ।
मान्छेको चरित्रको बारेमा कुरा गर्दा 'भालु’, 'झिंगे’ भनेपछि लम्बेतान व्याख्या गरिरहनुपरेन । गैरकानुनी कामलाई दर्ुइ नम्बरी, दुक्की भन्दा धेरैले बुझ्छन् । तर, कारोबार गर्नेहरुले त समूह र ठाउँअनुसार पनि बेग्लाबेग्लै शव्द प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।
लाक्षणिक शव्दहरु कतिपय निश्चित कार्यालय, समूहले पनि आपसमा बुझ्ने गरीमात्र प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । जसलाई अर्को समूह र कार्यालयले तत्काल बुझ्दैनन् । कतिपयले चाहिं आचरणका आधारमा पनि साथी वा अन्य कुनै व्यक्तिको नामकरण गरेका हुन्छन् ।
उखान तुक्का पनि यसरी नै बन्दो हो । बोलीचालीमा प्रशस्तै लाक्षणिक शव्दहरु प्रयोग भइरहेपनि लेखाईमा कम प्रयोग गरिन्छ । कतिपय शव्दको मिठास बोल्दा जति लेख्दा पाइदैन । तपाईहरु चाहिं कस्ता-कस्ता लाक्षणिक शव्द प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यी पंक्तिहरु पढ्दै जाँदा तपाईलाई अरु लाक्षणिक शव्दहरुको संझना आयो कि !
इलाम पोष्ट दैनिकमा २०६८ असार २० गते प्रकाशित
Posted by रोशन साँवा at 12:48 AM 1 comment:
एसएलसीको नतिजाले उच्च माविलाई संकट
Posted by रोशन साँवा at 6:32 AM No comments:
गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरी एडमिनिस्ट्रेशनमा हस्ताक्षर ...